Mini Hospital es un simulador casual para tu móvil Android | Androidsis
Nwere ike mezuo nrọ gị ma nye ụmụ amaala kachasị mma na Minilọ Ọgwụ Mini
Obere ụlọ ọgwụ bụ simulator nkịtị nke anyị ga-esi mara otu esi ewere ụlọ ọgwụ zuru oke. Egwuregwu egwuregwu nke ejiri egwuregwu dị mfe dị mfe na nke anyị hụburu na egwuregwu ndị ọzọ mara mma, ọ bụ ezie na ọ nwere isiokwu dị iche.
N'ebe a anyi aghaghi iru nke anyi ụlọ ọgwụ site na ọkọ ihe fọrọ nke nta ka enweghi ngwụcha atụmatụ nke otu na njikwa niile metụtara mgbe ịnwe ndị nọọsụ, ndị dọkịta na ndị ọrụ niile ga - eme ka obodo gị nwee ọmarịcha ọrụ ahụike ọha na eze.
1 Wụ ụlọ ọgwụ gị
2 Lekọta ndị ọrịa gị na Mini Hospital
3 Wepụta Krismas na Hospitallọ Ọgwụ Obere
Wụ ụlọ ọgwụ gị
Ma ọ bụ ezie na ọ dị anya na ọtụtụ site na egwuregwu ọzọ na-ewu ewu na nso nso a, Kedu ka ụlọ Nickelodeon Mad?, ọ ga-enye anyị ohere ikpebi ala ole ụlọ ọgwụ anyị ga-enwe na họrọ ndị ọrụ kacha mma iji nweta ọrụ kacha mma enwere ike ma nye ụmụ amaala nnukwu ọrụ.
Ihe egwuregwu a na-adabere na ịhọrọ ahịhịa dị iche iche ebe anyị ga-ewu ụlọ ọrụ ahụike niile dị mkpa nye obodo ahụ ọrụ ahụ dị mkpa. Ọ bụghị naanị na anyị ga-achọ ụlọ ndị a pụrụ iche maka ụdị ọgwụgwọ ọ bụla dị ka rediology, mana anyị ga-etinyekwa ndị ndị ọrụ ahụike na-ejikarị.
Como ọtụtụ ndị ikwu na-abịakwa eleta ndị ọrịa anyịStoreslọ ahịa ndị ahụ, ụlọ ahịa akwụkwọ na ụdị ụlọ ahịa ndị ọzọ ga-adị mkpa karịa ịnwe nnukwu ụlọ ọgwụ nke nwere anyaụfụ nke obodo ndị ọzọ.
Lekọta ndị ọrịa gị na Mini Hospital
Ihe dị mkpa banyere Mini Hospital bụ na anyị nwere ike ọbụna na-elekọta ndị ọrịa nke ahụ ga-abanye n'ọnụ ụlọ dị iche iche. Nke ahụ pụtara, ị ga-ekenye ha ụlọ dị iche iche ụlọ ọgwụ gị nwere dị ka a sị na ị bụ otu nnabata. Nke a na - enye mmetụ pụrụ iche ọzọ na - abụkarị ụdị egwuregwu egwuregwu gam akporo nke anyị na - eji oge anyị niile na - azụta ụlọ ọhụụ ọhụrụ iji nye ọzụzụ ọzụzụ ahụike dị iche iche.
Ọ dị ezigbo mkpa ka ị zụọ ndị ọrụ gị ka ha nwee ike ị nweta ọtụtụ uru na ngalaba ọgwụ ha dị iche iche. Iji nye gị echiche gbasara ndị ọrụ niile ị ga-achọ na Hospitallọ Ọgwụ Mini, chee echiche ndị dọkịta na-awa ahụ, ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị na-enyere aka, na ọbụna ndị isi kichin iji weta nri kachasị mma nye ndị ọrịa niile n'ụlọ ọgwụ anyị.
Nhazi nke ulo ogwu bu ihe bu isi na ọ bụghị ihe niile dị ọcha na "akọrọ". Ga-enwe ike inweta ihe ịchọ mma dị iche iche iji mee ka ụlọ ọgwụ ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma ọbịbịa ahụ adịchaghị ogologo. Isi ihe ọzọ nke Hospitallọ Ọgwụ Obere ka ọ pụta dị ka ihe nkedo na-enweghị atụ nke nwere ekele nke ya ịnwere onwe ya na ụdị freemium ahụ na-ekpo ọkụ.
Wepụta Krismas na Hospitallọ Ọgwụ Obere
Naanị emelitere ubochi gara aga na isiokwu ekeresimesi, dị nnọọ ka i nwere PUBG Mobile nwere nnukwu mmelite ahụ na maapụ Vikendi ya, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ige ntị na egwu egwu ahụ na ihe ịchọ mma ekeresimesi ahụ, nke a bụ egwuregwu nwere ike ịmepụta ezigbo ahụmịhe na ahụmịhe.
Nyocha ya mara ezigbo mma na nka pixel ahụ na arụmọrụ zuru oke na ọkwa niile. Ọ bụ egwuregwu na ịla azụ ịke na nke a na-egosi na nke ọ bụla nooks na crannies. Enweela nhọrọ niile na ahụmịhe enyere karịa karịa. O nweghị ihe ọ bụla anya pụrụ iche ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na egwuregwu ndị ọzọ nke ụdị ya, mana ọ na-ahapụ ezigbo ekpomeekpo iji gaa n'ihu ịnụ ụtọ ya ọtụtụ ụbọchị.
Obere ụlọ ọgwụ bụ ụlọ ọgwụ na-adọrọ adọrọ ma na-atọ ụtọ maka mkpanaka gị yana nke inwere n'efu na Playlọ Ahịa Google. Ọ gaghị abụ otu n'ime egwuregwu ndị echetara na gam akporo, mana ọ nwere ike igbu ọtụtụ awa nke mfe. Naanị anyị na-agba gị ume ka ị wụnye ya ma lelee ya n'onwe gị. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịme akara na nkà mmụta ọgwụ, dị mkpa.
Obere ụlọ ọgwụ
Onye edemede: 67%
Dị mma na pixel art
Etinyeghi maka 18: 9
Developer: Egwuregwu Tw
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nwere ike mezuo nrọ gị ma nye ụmụ amaala kachasị mma na Minilọ Ọgwụ Mini
Etu esi ebudata vidiyo Twitter na gam akporo
The purest RPG na gam akporo si kpara Neverwinter ehihie na abalị: enwekwukwa Edition